“राजाको संविधान” छापिएपछि हलचल मच्चियो - Naya Patrika
“राजाको संविधान” छापिएपछि हलचल मच्चियो
भरतमोहन अधिकारी पूर्वअर्थमन्त्री | चैत ०६, २०७३
पूर्वउपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी एमाले नेता हुन् । ०४७ सालको संविधानको मस्यौदाकारसमेत रहेका अधिकारी तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँगको पौँठेजोरीबाट मात्रै संविधान जारी गर्न सम्भव भएको बताउँछन् । अधिकारीले संविधान बनाउँदा तत्कालीन राजासँगको रोचक ‘शीतयुद्ध’ नयाँ पत्रिकाकर्मी शुरोजंग पाण्डेलाई बताएका छन् ।
पञ्चायतविरुद्ध असन्तुष्टि चुलिँदै थियो, छिटफुट आन्दोलन चलिरहेकै बीचमा कांग्रेससँग पञ्चायत ढाल्न संयुक्त जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने सहमति जुट्यो । तर, संयुक्त जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरू कसरी सहभागी हुने ? पार्टीमा यस विषयमा गम्भीर छलफलपछि आरके मैनालीलाई भेट्न म भैरहवा जेलमा गएँ । उनी त्यतिवेला मालेका प्रभावशाली नेता थिए । यसरी उनलाई जेलमै भेट्नुको मेरो एउटै उद्देश्य थियो– कम्युनिस्टहरूको संयुक्त वाममोर्चा बनाउने अनि संयुक्त जनआन्दोलनमा सहभागी हुने विषयमा कुराकानी गर्ने । निकै लामो छलफलपछि उहाँले पनि संयुक्त वाममोर्चा बनाएर आन्दोलनमा सहभागी हुने कुरामा सहमति जनाउनुभो । उहाँसँगको कुराकानीकै आधारमा मदन भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन माले र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन माक्र्सवादी पार्टीका तर्फबाट मोर्चा गठनका लागि कार्यदल बन्यो । वाममोर्चा बनाउने विषयमा साहना प्रधान र झलनाथ खनालसँग पनि कुरा भयो, पछि निर्मल लामा नेतृत्वको जनर्मोचा नेपाललाई पनि सामेल गर्ने सहमति बन्यो । वाममोर्चा बनाउने पहिलो वक्तव्यको मस्यौदा मैले नै गरेँ । अन्तत: माले, माक्र्सवादीसहितको वाममोर्चा गठनपछि भएको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतासँगै ३० वर्ष शासन गरेको पञ्चायत ढल्यो ।
जनआन्दोलनको सफलतापछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । तर, सरकार बनेलगत्तै राजा वीरेन्द्रले संविधान सुझाब आयोग गठन गरी मलाई समेत सदस्य बनाएको खबर थाहा पाएपछि म आश्चर्य चकित भएँ । मलाई सदस्य बन्ने कि नबन्ने भनेर कतैबाट सोधिएकै थिएन । अन्तरिम सरकारको सिफारिसविनै राजाले एकाएक ७ सदस्यीय आयोग बनाएको सार्वजनिक भएकाले म आश्चर्यमा परेको थिएँ । राजाको त्यो निर्णय थाहा पाएर मलाई रिस पनि उठ्यो । थाहा पाउनेबित्तिक्कै कसैसँग सल्लाह नगरी अस्वीकार गर्दै आयोगमा नबस्ने वक्तव्य जारी गरेँ । वक्तव्यमा उल्लेख थियो– म माक्र्सवादी पार्टीको सदस्य हुँ, त्यसैले आयोग बनाउने, नबनाउने, त्यहाँ को पठाउने निर्णय त मेरो पार्टीले गर्ने हो, राजालाई त्यसरी आयोग बनाएर जिम्मेवारी दिने कुनै अधिकार छैन । आयोग बनाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै छ ।
आयोग नै गैरकाननुी हुने दाबी गर्दै असहमतिसहित मैले अचानक जारी गरेको वक्तव्य रेडियो नेपालले प्रसारण गरेपछि हल्लीखल्ली मच्चियो । मेरो भनाइ थियो– म वाममोर्चाको प्रतिनिधि हुँ, राजाले खटाउने, राजाको प्रतिनिधि होइन, राजा त संवैधानिक सीमाभित्र बस्नुपर्छ । रेडियो नेपालले एकपटक होइन, दिनभरि पटकपटक समाचार बुलेटिनमा त्यही वक्तव्यलाई समाचार बनाएर प्रसारण गरेपछि सिफारिसमा परेका अरूले पनि अस्वीकार गर्दै वक्तव्य निकाले । भोलिपल्ट दमननाथ ढुंगना, पर्सिपल्ट विश्वनाथ उपाध्यायले पनि मेरै आशयको वक्तव्य जारी गरी आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेपछि पहिलो बैठक नै नबसी ७ सदस्यीय त्यो आयोग विघटन भयो । अन्तत: राजा हच्किए, दबाबमा परे । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले ९ सदस्यीय आयोग बनाउने निर्णय गर्यो‍ । आयोगमा कांग्रेस, वाममोर्चा र स्वतन्त्र व्यक्तिका तर्फबाट ३-३ जना सदस्य रहने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।
आयोग गठनको निर्णयपछि कसलाई पठाउने ? तत्काल वाममोर्चामा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । त्यसैले वामर्मोचाकी अध्यक्ष सहना प्रधानको निवास सानेपामा निर्णयका लागि हामी भेला भयौँ । बैठक सुरु हुनेबितिक्कै कसलाई पठाउने ? नाममा सहमति जुट्ने स्थिति देखिएन । सहमति नभएपछि मतदान प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने सहमति बन्यो । हामी बैठकमा ७ जना थियौँ । पहिलो चरणको मतदानमा म (भरतमोहन अधिकारी) र निर्मल लामाले जित्यौँ, तर माधवजी चुनिन सक्नुभएन । २ जनाको बराबरी मत आएपछि पुन : मतदान हुँदा भने उहाँ पनि चुनिनुभो । बैठकमा जनर्मोचाले निर्मल लामा, माक्र्सवादीले मलाई र मालेका तर्फबाट झलनाथजीले माधव नेपाललाई प्रस्ताव गर्नुभो । तर, चारजना उम्मेद्वार बनेका कारण मतदानबाट आयोगको सदस्यको टुंगो लाग्यो ।
निक्कै मिहिनेत गरेर ०४७ सालको संविधानको मस्यौदा तयार भएपछि राजालाई बुझायौँ । तर, राजाले त्यो मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गरिहाल्ने हिम्मत गरेनन् । लामै समय थन्क्याइएपछि हामीलाई लाग्दैथ्यो– कतै राजाले गडबडी पो गर्लान् कि ! यस्तो संशयबीच निर्मल लामा, माधव नेपाल र मैले सल्लाह गरेर एकपटक प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास पुग्यौँ । उहाँलाई भेट्नेबित्तिक्कै हाम्रो जिज्ञासा थियो–प्रधानमन्त्रीज्यू ! संविधान के भइरहेको छ ? तर, उहाँ बिरामी हुनुहुँदो रहेछ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको माथिल्लो कोठमा उहाँ सुतिरहनुभएको थियो । जिज्ञाशालगत्तै उहाँले एउटा कपी दिँदै भन्नुभो– ल हेर्नुस् यही हो राजाको संविधान । निकै गहिरिएर पाना पल्टाउँदै हामीले त्यो संविधान हेर्यौँ‍ अनि पढ्यौँ । तर, त्यहाँ त हामीले गरेको मस्यौदा केही बुँदा केरमेट गरी राजाका केही अधिकार थपिएको रहेछ । कार्यकारी अधिकार सबै मन्त्रिपरिषद्मा हुने, राजामा नहुने कुरा लेखिएकै ठाउँमा काँटछाँट गरेको देखेपछि हामीलाई रिस उठ्यो । हामीले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भन्यौँ– तपाईं एक कदम पनि नझुक्नुहोला, बरु दोस्रो लडाइँ सुरु गरौँ, झुक्नुहुन्न, राजा धेरै मात्तिएछन् । हाम्रो आक्रमक प्रस्तुति देखेर प्रधानमन्त्री भट्टराई केही बोल्नुभएन, हामी बालुवाटारबाट बिदा भयौँ । सीधै आयोगको कार्यलय पुगेर त्यही मस्यौदा आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायलाई देखायौँ । उहाँ पनि पढेर बेस्सरी झोक्किँदै भन्नुभो– अघि बढ्न खोज्ने राजा ? कार्यलयमै राजाको त्यो संविधान फोटो कपी गरेर तीनजनाले बाँड्यौँ ।
त्यतिवेला म सानेपास्थित सहानाजी (सहाना प्रधान)को घरमा बस्थेँ । मन शान्त भइसकेको थिएन, के सुर चढ्यो, तत्काल गोरखापत्रका पत्रकार रमेशजीलाई फोन गरेँ, उनले पनि तुरुन्तै उठाए । मैले भने– म सुझाब आयोगको सदस्य भरतमोहन अधिकारी । राजाले संविधान बनाएका रहेछन, त्यो कपी मसँग छ, त्यसको भण्डाफोर गर्नुपर्यो‍ । होर ? भन्दै जवाफ फर्काए । उनी तत्काल मलाई भेट्न निवासमै आइपुगे । मैले त्यो कपी उनलाई दिएँ अनि राजाको संविधानबारे केही ‘कमेन्ट’ पनि गरेँ । राजालाई कुनै अधिकार दिन सकिँदैन, यदी उनी मान्दैनन् भने अर्को लडाइँ लड्नुपर्छ, हामीले दिएको मस्यौदालाई यसरी मनपरी ढंगले काँटछाँट गर्ने कुनै अधिकार छैन । राजाले फेरि कु गर्न खोजेकाले हामी विरोध र भण्डाफोर गर्छौं । त्यो कमेन्ट र संविधानको मस्यौदा जस्ताकोतस्तै भोलिपल्ट गोर्खापत्रमा –राजाको संविधान, भरतमोहनको प्रतिक्रिया ब्यानर शीर्षकमा छापियो । त्यो समाचार छापिएपछि काठमाडौंमा निकै हलचल मच्चायो । जनताले ठाउँ–ठाउँमा सडकमा जुलुस निकाले । आक्रोशित जनताले ठाउँ–ठाउँमा गोर्खापत्र जलाउन थाले । गोर्खापत्रको धेरै माग भएकाले होला, त्यो दिन अपराह्न १२ नबज्दै गोर्खापत्रले दोस्रोपटक प्रकाशित गरेर पत्रिका निकाल्यो । २ बज्दा नबज्दै राजाको वक्तव्य आयो ।
वक्तव्यमा राजाको संविधान भन्दै मनगढन्ते भन्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ, नचाहिने कुरा गर्ने भन्दै मलाई गाली गरिएको थियो । त्यो वक्तव्यपछि श्रीमतीले डराउँदै भनिन्–तपाईंलाई दरबारले पक्राउ पो गर्छ कि क्या हो ! प्रधानमन्त्री विराटनगर थिए । उनले त्यहीँबाट वक्तव्य निकालेर ‘नचाहिने कुरा छाप्ने भन्दै गोर्खापत्रका सम्पादकलाई कारबाही गर्छु’ भने । तर, पछि सम्पादकमाथि कुनै कारबाही भने भएन ।
हामीले बनाएकै मस्यौदामा राजाका अधिकार थपिएका थिए । राजाको असन्तुष्टिपछि हामीले बनाएको मस्यौदामाथि पनि सुझाब लिन मन्त्रिपरिषद्ले तीन सदस्यीय कार्यदल बनायो । कार्यदलमा नीलाम्बर आचार्य, गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय र केशरजंग रायमाझी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले राजालाई केही खुसी पार्नेगरी हेरफेर गर्नुभो, प्रस्तावनामा । हामीले नेपाल स्वतन्त्र हिन्दू राजतन्त्र भएको देश लेखेका थियौँ । तर, हामीले राखेको कमा हटाएर हिन्दू राजा बनाइदिनुभयो । अपरिवर्तनीय केही नहुने भनेका थियौँ, गणतन्त्रको नारा लगाउन पाउनुपर्छ भन्ने थियो । संवैधानिक राजतन्त्रको प्रस्तावनामा अपरिवर्तनीय कुरा उल्लेख थिएन । तर, फेर्न पाइने बनाउनुभो । कात्तिक २३ गते जारी भयो ।
इन्जिनियर बन्न नसकेका मन्त्री